1, Ny andro voalohany tamin'ny volana volana voalohany dia tsy nantsoina hoe Fetiben'ny Lohataona tamin'ny andro taloha, fa Andro Taom-baovao. 2, amin'ny tantaran'ny sinoa, ny teny "Fetiben'ny Lohataona" dia tsy festival, fa firesahana manokana ny "Start of Spring" an'ny 24 tan ter ...
KEMA no fanafohezana holandey (Keuring Van Elektrotechnische Materialen). Nivelatra tsikelikely ny sehatry ny orinasa KEMA, ary lasa fahefana mahaleo tena eo amin'ny sehatry ny serivisy angovo manerantany. Nandritra ny 80 taona mahery, KEMA dia nanampy ny mpanjifa haminany ny làlan'ny fanovana sy ny ...
33kV any an-kalamanjana 35kV 36kV 1250A mpamadika vacuum miaraka amin'ny mpanova ankehitriny
33kV any an-kalamanjana 35kV 36kV 1250A mpamadika vacuum miaraka amin'ny Transformer. Afaka miasa tsara amin'ny maripana manodidina: - 40 ℃ ~ + 40 ℃. Ny firafitra tsotra, ny fikojakojana maimaimpoana ary ny androm-piainana maharitra dia ampiasaina amin'ny haavon'ny tsipika 35kV, ao anatin'izany ny tsipika ambony, orinasa indostrialy sy fitrandrahana, tobin-kery, subst ...
Fa maninona no ilaina fitaovana mpanova metatra? Izany dia hialana amin'ny fandoroana ny metatra sy ny fanangonana vola. Raha amin'ny fitehirizana vola, ny vidin'ny metatra kely misy ankehitriny dia misy ambany noho ny metatra ankehitriny. Raha ny fahitana ny fiarovana ny metatra elektrika ...
Fitsipika fanapahana boriborintany ivelany
Ao amin'ny boriborintany, ny mpandika faritra dia mihetsika toy ny sekta ihany, fa ny fuse dia afaka miasa indray mandeha ihany, raha ny mpandika faritra kosa dia azo ampiasaina miverimberina. Raha mbola mahatratra ambaratonga mampidi-doza ny ankehitriny dia mety hiteraka boriborintany misokatra avy hatrany izany. ny tariby mivantana ao amin'ny faritra dia mifandray amin'ny faran'ny roa ...
Endri-javatra amin'ny fanapahana fuse dropout
(1) Tombony lehibe amin'ny fanapahana fuse dropout ① Fifidianana tsara. Raha mbola mifanaraka amin'ny filan'ny 1.6: 1 ny tahan'ny fifidianan-tsolika mihoatra ny fehezan-dalàna mifehy ny fenitra nasionaly sy ny fenitra IEC, izay mamaritra ny onja misy ny uppe ...
COVID-19 dia aretina virosy vaovao izay mahatratra olona mihoatra ny 1 tapitrisa manerantany!
avy amin'ny admin tamin'ny 20-04-04
Azo ampitaina amin'ny olona tsirairay. Ny viriosy dia inoana fa mifindra amin'ny ankamaroan'ny olona. Eo anelanelan'ny olona mifandray akaiky (eo amin'ny 2m). Ny vongan-tsofina entin'ny taovam-pisefoana vokarin'ny olona iray voa rehefa mikohaka, mievina na miresaka. Ireny rano mitete ireny dia mety latsaka ao am-bava na orona ...
Topy maso Vacuum circuit breaker
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-03-11
Fampidirana ny mpamadika vacuum "Vacuum Circuit Breaker" no nahazo ny anarany satria ny fitaovana anaovany famonoana ariva sy ny fampitaovana ny elanelan'ny fifandraisana aorian'ny famonoana ny arc dia samy banga; manana tombony amin'ny habe kely izy, lanja maivana, mety amin'ny opera matetika ...